UCanzibe 11, 2018 admin
Bank of Canada ukusebenzisa blockchain kuba kweso yokusombulula izibambiso
Okona kumva “Project Jasper” izilingo blockchain lubonise ukuba nezikali kukhutshwa ziyasebenza kwi automating izibambiso zokuhlala okwixesha-lokwenene, ngokutsho Bank of Canada kunye namaqabane ezimbini phezu “lokuphepha ezihlangeneyo kunye nokuhlaliswa intlawulo” project.
Gerry Gaetz, umongameli kanye CEO of Iintlawulo Canada, ucatshulwe esitsho:
“Oku kubonisa ukuba kunokwenzeka ukunikezela iintlawulo ngendlela kwenziwe ngaphambi akuzange – ngokuthi betshintshisa ngqo imali evela abathengi nabathengisi, leyo zokuhlala nangoko.”
Upbit exchange Korean ahlasela yi abatshutshisi
Abatshutshisi e South Korea baye kuthiwa ayihlasela loo cryptocurrency Exchange likhulu kweli lizwe, UPbit. Abaphandi ukusuka abatshutshisi’ ofisi Seoul ababekwababelihlolile ofisi intloko ngokutshintshiselana ngoMeyi 10.
UPbit kurhanelwa lenkohlakalo ukuthengisa kuthiwa cryptocurrency kubaxumi ukuba ayilungelelani ukubamba, Ngokwalo mbiko.
i abatshutshisi’ ofisi wathi: “Siye yafumana disks nzima kunye neencwadi kwengxelo nge ngokuthathelwa. Uhlalutyo kulindeleke ukuba uthathe iintsuku.”
Huawei iquka Bitcoin isipaji app yayo ivenkile app
Abasebenzisi Huawei phones ziya kukwazi download Bitcoin KDE kwizixhobo zazo okokuqala ukuqala ngoLwesihlanu.
Huawei, wesithathu-enkulu nefoni umenzi ehlabathini, ukhulula BTC.com kaThixo Bitcoin semali AppGallery yayo, NGOKUTSHO Alejandro de la Torre, vice BTC.com kaThixo mongameli kokusebenza kweshishini.
Uthe AppGallery uya pre-efakwe wonke Huawei phones ezintsha.
baya Uhambise kuba nefuthe kakhulu kwimarike Chinese, apho Huawei mobile phone nomthengisi enkulu. Iibhloko Urhulumente Chinese Android i-Google Play Store kunye amanye amacandelo iTunes Apple ukuba, ukucutha ufikelelo apps ezifana BTC.com kaThixo. Nangona China ubavalele phantsi namaqonga cryptocurrency sorhwebo, abantu ngumnikazi ezimalini virtual.
"Yinto ithuba elihle lokuba angene kwimarike Chinese,"De la Torre uthe-ndlebe ngefoni. "Ukusetyenziswa kweentlawulo ikheshi kunye apps inkulu kakhulu kwaye inkqubo zebhanki yemveli lungekho, ngoko kukho ityala ukusetyenziswa kakuhle ukuba iintlawulo crypto ukuze zikhule apho. "
Ilizwe wokhuphiswano ...
Bemithetho U.S ...
Post Previous:Bots Trading for Cryptotrading
Post Next:Crypto Abafikisayo